Backhoe Loaders for sale Factory - China Backhoe Loaders for sale Manufacturers, Suppliers
Iwo akakosha echimiro maficha uye tekinoroji yepamberi inoshandiswa muWIK388T backhoe loader
WIK 388 Iyo backhoe inotakura inosanganisa iwo maviri michina yeyekuchera uye iye anorodha. Iyo ine ese mashandiro eakafukunura uye anorodha. Mumwe muchina une akawanda mabasa, ari nyore uye anochinjika, uye inoderedza mutengo wekutenga uye kushandisa mutengo wemuchina wese. Inesarudzo Deutz, Cummins uye mamwe mainjini akakurumbira uye yeItaly Carraro yekufambisa system. Inogona kuve yakashongedzwa akasiyana-siyana anobatsira einjiniya maturusi akadai sekutyora, pasi anchor chibooreso, vibration rammer, nezvimwewo Ichi chigadzirwa ...
iye akakosha masisitimu echimiro uye epamberi tekinoroji kushandiswa muWIK30-25 Backhoe loader
WIK Iyo backhoe inotakura inosanganisa michina miviri yeyekuchera uye yekuremerwa. Iyo ine ese mashandiro eakafukunura uye anorodha. Mumwe muchina une akawanda mabasa, ari nyore uye anochinjika, uye inoderedza mutengo wekutenga uye kushandisa mutengo wemuchina wese. Inesarudzo Deutz, Cummins uye mamwe mainjini akakurumbira uye yeItaly Carraro yekufambisa system. Inogona kuve yakashongedzwa akasiyana-siyana anobatsira einjiniya maturusi akadai anotyora, pasi anchor chibooreso, vibration rammer, nezvimwewo Ichi chigadzirwa chiri w ...